'I-American Horror Story' Isizini se-10 sabelana ngokubukeka kwezilo zayo ezinde ezigqoke izilo
Ikhaya Izindaba Zokuzijabulisa Ezesabekayo 'I-American Horror Story' Isizini se-10 sabelana ngokubukeka kwezilo zayo ezinde ezigqoke izilo
by UTrey Hilburn III Mashi 11, 2021
by UTrey Hilburn III Mashi 11, 2021 22,010 ukubukwa
Indaba ye-American Horror izindaba zesizini 10 seziqala ukushisa. Sisanda kwabelana ngezindaba ezifakiwe IMacaulay Culkin's indima efakwe ku-Instagram kaRyan Murphy. Manje, sibheka ngomzimba ogcwele ezinye zalezo zidalwa ezibukhali ezinamazinyo esazibona zihlekiswa ku-teaser eyisitayela ekuqaleni konyaka.
Lawa ma-dudes amakhulu ame amade ngejazi elide elinesitayela ukubhangqa ngamazinyo awo abukhali. Lezi zidalwa ezibukeka zinempandla zibukeka zijwayele kakhulu akunjalo? Uma uke wabona IBlade 2, leso kungaba yisizathu sokuthi laba bantu babukeke bejwayele.
I-vampires in IBlade 2 wabelane ngokubukeka okufanayo. Amakhanda anempandla, amazinyo abukhali namajazi amade. Yebo. Hlola, hlola futhi uhlole. Umbuzo omkhulu manje ngukuthi, ingabe lawa ma-vamp?
Ingemuva lesizini yakamuva ye Indaba ye-American Horror yiMassachusetts. Kungenzeka yini ukuthi lokhu kube yisibhamu sikaRyan Murphy ULoti kaSalem? Umakhelwane kanye nalezo zinsimbi ezinempandla ngokuqinisekile zibukeka sengathi zizongena kahle, nezwe leNkosi. Kukhona manje okunye ULoti kaSalem ngisendleleni njengamanje, ngakho-ke lokhu kuzoba yisikhathi esingajwayelekile sokunye ukuthatha kulowo mhlaba. Kepha, uma uke wabona i-AHS usuvele uyazi ukuthi iMurphy yeqa izindikimba ezinjengokusangana. Ngisho, cabanga nge-AHS Asylum. Lowo wayebhekene nombulali obulalayo, izilo, iziqhwaga, izindelakazi, futhi lokho kwakumane kuyisiqalo nje. Ngakho-ke, mhlawumbe lawa ma-vamp, uma engama-vamp, angahle abe yingxenye encane yendaba enkulu.
Akufani noMurphy ukuphinda izingqikithi futhi Indaba ye-American Horror usevele wenze ama-vampire esikhathini esedlule. Ngakho-ke, ingabe bayaphinde bavakashele? Hhayi, asazi kepha singaqagela futhi njengamanje kuqinisekile ukuthi kubukeka kanjalo.
Ngabe nina bantu nicabangani ngezinto zakamuva ezivela Indaba ye-American Horror? Cabanga ukuthi lokhu kungaba kukaMurphy ULoti kaSalem? Sazise esigabeni sokuphawula.
Bheka izithombe ezisuka ekuVuseleleni kukaDexter lapha.
Dlulisa amehlo kuma-Cateories Khetha Category I-4K UHD (4) I-Amazon (i-movie) (7) I-Amazon (uchungechunge) (11) I-AppleTV + (6) Imisebe ye-Blu (18) Amahlaya Ahlekisayo (49) Amahlaya (14) Izinto Ezipholile Zokuthenga (18) Izinto Ezintsha Zokukwenza (5) Izindaba Zokuzijabulisa (1) I-Facebook (uchungechunge) (1) Izinganekwane (44) Kutholakale amavidyo (28) I-Gore (24) Izinkukhu (3) I-HBO (ama-movie) (6) I-HBO (uchungechunge) (7) Izincwadi zeHorror (62) Izindaba zeHorror Entertainment (10,969) Ama-movie asabisayo (421) Uchungechunge lwe-Horror (124) Ama-Horror Subgenres (10) IHulu (uchungechunge) (6) Izingxoxo (i-movie) (42) Izingxoxo (uchungechunge) (5) I-LGBTQ Horror (42) Uhlu (ama-movie) (40) Uhlu (uchungechunge) (2) Imakethe (21) I-Monster Horror (9) Isiqeshana se-Movie (2) Ukubuyekezwa kwe-Movie (62) Ama-movie (15) Umculo (38) INetflix (i-movie) (32) INetflix (uchungechunge) (46) Okungeyona inganekwane (5) I-Paranormal (76) I-Psychological Horror (thrillers) (53) Uchungechunge (1) Ukubuyekezwa kochungechunge (9) Ukuqhaqhazela (i-movie) (54) Ukuqhaqhazela (uchungechunge) (19) I-Slasher (4) Okungajwayelekile futhi Okungajwayelekile (39) Ama-Movie wokusakaza (104) Uchungechunge Lokusakaza (44) Amathoyizi (4) I-trailer (Imidlalo) (1) I-trailer (i-movie) (279) I-trailer (uchungechunge) (49) Imidlalo yama-trailer (1) Ubugebengu Bangempela (49) Uchungechunge lwe-TV (4) Imidlalo Yevidiyo (189) I-YouTube (i-movie) (3) I-YouTube (uchungechunge) (13)
'UKrampus The Naughty Cut' uyeza ku-4K ...